शिक्षा / स्वास्थ्य « Onlinetvnepal.com
फलफुल मानव शरिरमा पाेषक तत्व दिलाउने आहारमा पर्दछ । यसले हाम्रो शरीरलाई चाहिने भिटामिन उब्लब्ध गराउनुको साथै अनुहारमा चमक ल्याउन सहयोग गर्दछ । फलफुल खाएपछि हामी त्यसको बोक्रालाई फोहरमा मिल्काई दिन्छौ किनकी हामीलाई यसको फाईदाबारे ज्ञान छैन जुन यसप्रकार छन् – ﻿ मेवाको बोक्रा – मेवाको बोक्रा तास्दा एक किसीमको
भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल (बीपीकेएमसीएच) को हेड एन्ड नेक युनिटमा उपचारका लागि दिनहुँ पुग्ने बिरामीहरूमध्ये १५ प्रतिशतजति ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिस (ओएसएफ) अर्थात् मुख नखुल्ने रोग भएकाहरू छन् । समयमै उपचार भए शतप्रतिशत बाँच्न सकिने यो रोग लिएर आउनेहरूमध्ये करिब ९० प्रतिशतसम्म १६ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्म उमेर समूहका छन् । र,
कफीको अनौठो चमत्कार ! जस्तो सुकै जिद्दी दागलाई पनि सजिलै पार्छ सखाप !
सुन्दरता महिलाहरुको लागि एक प्रतिक हो । तर अनुहारमा आएका विभिन्न दागको कारण महिलाहरुको सुन्दर हुने चाहनामा परिवर्तन देखिएको हुन्छ । लामो समय देखि अनेकौ उपाय अपनाएर उपचार गर्दा गर्दै थकित भएर उपचार गर्नै छोडेका हुन्छन् । यस्तो समस्या धेरै महिलामा हुने गर्छ । अनावश्यक दाग हटाउन हजारौ हजार पैसा
टुथपेष्ट र चिनीको चमत्कारीक काम : यसरी घरमै गर्भ जाँच्ने यो घरेलु विधि ! जानी राखौ
नेपाल जस्तो देशमा नियोजित कम र अप्रत्यासित गर्भ बढि रहन्छ । बिना योजना वा भनौ नचाहादा–नचाहादै रहेको गर्भले दम्पतिमा तनाव पैदा गर्छ । यो तनाव अब घरेलु विधिबाटै घरमै बसेर हल गर्न सकिन्छ । फेरी ग्रामिण भेगमा नचाहाँदा नचाहाँदै बसेको गर्व थाहा पाउन घण्टौ या दिन खर्च गरेर सहरमा आउनुपर्छ
के तपाइलाई सोयाविनको तरकारी मन पर्छ र ? यसरी पकाउनुहोस मासु भन्दा मिठो हुन्छ…..( भिडियो सहित)
हामीले खाने खानाले नै हाम्रो शरिरमा उर्जा प्रबाह गर्ने हुदा दैनिक कार्यहरूलाइ निरन्तरता दिन सजिलो हुन्छ या भनौ तागत दिन्छ। बिहान बेलुका घरमा खान त पाकेकै हुन्छ अनि हामी कसैले मिठो त कसैले नमिठो आफ्नो रूचाइ र रोजाइ अनुसार खाएकै हुन्छौ। हामीले खाने खानामा स्वादको मात्रालाइ सबैभन्दा मिठो बनाउने कुरा
कसरी हटाउने अनुहारको कालो पोतो ? हटाउने विधि सहित !
छाला कालो, खस्रो हुनु विभिन्न किसिमका फोका, दाग, घाउ आउनुलाई छालाको समस्या वा रोग भनिन्छ । छालाको रंग चम्किलो खालको हुन्छ । स्वस्थ छाला र अस्वस्थ छाला राम्ररी चिन्न सकिन्छ । महिलामा छालाको विषेश महत्व हुन्छ । छालाले सुन्दरताले अत्यन्त महत्व राख्दछ । छालाको स्वस्थताले नै सुन्दरताको विशेषता झल्काउँछ ।
खाली पेटमा खानुहोस् कालो अंगुर,यी रोगहरु हुन्छन् दूर ! पढेर शेयर अवस्य गर्नुहोला
अंगुर गजबको फलफूल हो। यो मीठो भएपनि यसमा चिनीको मात्रा पटक्कै हुँदैन। अंगुरमा सबै आवश्यक पोषक तत्त्व जस्तै पानी, सोडियम, पोटेसियम, साइट्रिक एसिड, म्याग्नेसियम र आइरन हुन्छन्। अनेकौं रोगबाट अंगुरले जोगाउँछ । यहाँ हामी त्यस्ता रोगको चर्चा गर्दैछौं जसलाई अंगुरले हटाउँछ। माइग्रेन माइग्रेन लागेपछि टाउकोको आधी भागमा पीडा हुन थाल्छ
जान्नुहोस : यस्ता छन् अमला खाँदाका फाईदाहरु ! पढ्नुहोस अमलाका गुणहरू बारे र शेयर गर्नुहोस
अमला भिटामिनको राम्रो स्रोत भएको एउटा फल हो । भनिन्छ, ३ वटा सुन्तलामा भन्दा १ वटा अमलामा धेरै भिटामिन हुन्छ र अमलाको रुखको फेदमा छायाँमा बसेर खानाले मात्रै पनि अनेक रोगहरू निको हुन्छन् । अमलामा विभिन्न रोगहरू निको पर्ने क्षमता हुन्छ । यसैगरी प्रत्येक दिन एउटा अमला खानाले युवाहरूमा यौन
एभोकाडो के हो ? के के रोग सन्चो पार्छ ? शेयर गरि सबै माझ पुर्याउनुहोस !
एभाेकाडाे, भिटामिन ए, बी, ई, फाइबर, मिनरल्स र प्रोटिनले भरिपूर्ण एक गहिरो हरियो रङको फल हो । लो फ्याट मोनोसेचुरेटेड भएको कारणले यसको सेवन गर्दा धेरै रोगबाट त बचाउँछ नै । साथै, ‘ब्युटी प्रब्लम्स्’बाट पनि टाढा राख्न सहयोग गर्छ । नेपाल मा पनि यस्को उत्पादन बढ्दो क्रम मा रहेको छ
टिमुर खानुले यी ६ रोगहरुबाट बचाउछ ! जानी राखौ
सबैलाई थाहा छ ,टिमुर विशेष गरि अचारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । टिमुरलाई दानाकै रुपमा होस् वा धुलो वनाएर प्रयोग गरिन्छ । यसको स्वाद तीतो, पिरो र जिब्रो पर्पराउने खालको हुन्छ । यसको गर्मी वा जाडोको दुवै समयमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले नेपाली टिमुर पछिल्लो समय विश्व बजारमै लोकप्रिय बन्दै गएको